Ụlọ Akwụkwọ Gilied. Ọ dị na Patasịn, Niu Yọk
Ihe e ji mara Ndịàmà Jehova kemgbe ụwa bụ na a na-azụ ha ka ha nwee ike ịna-ekwusa ozi ọma nke ọma. E nwere ụfọdụ ụlọ akwụkwọ pụrụ iche ndị ọsụ ụzọ na-aga ka ha nwee ike ‘jezuo ozi ha.’​—⁠2 Timoti 4:⁠5.
Ụlọ Akwụkwọ Ndị Ọsụ Ụzọ. Ọ na-abụ o ruo otu afọ mmadụ malitere ịsụ ụzọ oge niile, ya agaa ụlọ akwụkwọ a n’Ụlọ Nzukọ Alaeze dị ya nso. Abalị isii ka a na-aga ụlọ akwụkwọ a. Ọ na-enyere ọsụ ụzọ aka ịbịarukwu Jehova nso, ịmata otú ọ ga-esi na-ezi ozi ọma nke ọma nakwa ịnọgidesi ike n’ozi ya.
Ụlọ Akwụkwọ Maka Ndị Na-ekwusa Ozi Ọma Alaeze. Ọ bụ ndị bụterela ọsụ ụzọ aka na-aga ụlọ akwụkwọ a. Ọ bụ ọnwa abụọ ka a na-aga ya. Ha na-abụ ndị dị njikere ịhapụ obodo ha gaa ebe ọ bụla a ga-eziga ha. Ha na-ekwu ihe ahụ Aịzaya kwuru. Ọ sịrị, “Lee m! Ziga m.” Ha sikwa otú ahụ na-eṅomi Jizọs Kraịst bụ́ onye kacha zie ozi ọma n’ụwa. (Aịzaya 6:8; Jọn 7:29) Ịkwaga ebe ọzọ nwere ike ịpụta na onye ahụ ga-agbanwe otú o si ebi ndụ. Omenala na nri ndị obodo ebe ọ na-aga nwekwara ike ịdị ezigbo iche na nke ha. O nwekwara ike ịbụ na ọ ga-amụ asụsụ ọhụrụ ka o nwee ike izi ndị obodo ahụ ozi ọma. Ụlọ akwụkwọ a na-enyere ndị ọsụ ụzọ aka ịmụta ihe ndị ga-abara ha uru n’ebe a ga-eziga ha, nyekwara ha aka inwe nkà ndị ga-eme ka ha baara Jehova na ọgbakọ ya uru. Ndị na-aga ya bụ ụmụnna nwoke ndị lụrụla nwaanyị na ndị nwunye ha, ụmụnna nwoke na-alụbeghị nwaanyị nakwa ụmụnna nwaanyị ndị na-alụbeghị di. Ha na-abụkwa ndị nọ n’agbata iri afọ abụọ na atọ na iri afọ isii na ise.
Ụlọ Akwụkwọ Gilied. Gilied bụ okwu Hibru. A sụgharịa ya, ọ pụtara “Nnukwute Ihe Àmà.” Kemgbe a malitere ụlọ akwụkwọ a n’afọ 1943, ihe karịrị puku mmadụ asatọ gụrụla akwụkwọ n’Ụlọ Akwụkwọ Gilied agbaala nnukwute àmà “ruo nsọtụ ụwa.” Àmà ndị ha gbara rụpụtakwara ọtụtụ ihe ọma. (Ọrụ Ndịozi 13:47) O nweghị ọgbakọ Ndịàmà Jehova dị na Peruu mgbe mbụ e zigara ndị ozi ala ọzọ ebe ahụ. Ma ugbu a, e nweela ihe karịrị otu puku ọgbakọ n’ebe ahụ. Mgbe mbụ ndị ozi ala ọzọ rutere Japan, Ndịàmà Jehova erughị mmadụ iri n’ebe ahụ. Ma ugbu a, ha akarịala narị puku abụọ. Ọnwa ise ka a na-aga ụlọ akwụkwọ a. Ndị gara ya na-eji ọnwa ise ahụ amụ Baịbụl nke ọma. Ndị na-aga ụlọ akwụkwọ a bụ ndị ọsụ ụzọ pụrụ iche, ndị na-eje ozi n’ala ọzọ, ndị na-eje ozi na Betel nakwa ndị nlekọta sekit. Ihe a na-akụziri ha n’ụlọ akwụkwọ a bụ ihe ga-enyere ha aka ime ka ọrụ ikwusa ozi ọma na-aga n’ihu.
Olee uru Ụlọ Akwụkwọ Ndị Ọsụ Ụzọ bara?
Olee ndị na-aga Ụlọ Akwụkwọ Maka Ndị Na-ekwusa Ozi Ọma Alaeze?
AKỤKỌ NA VIDIO IHE NDỊ MERE EME
A ma Ndịàmà Jehova ama na ha na-akụzi Baịbụl n’ụwa niile. Olee otú e si ahazi ọrụ a, olee otú e si eduzi ya, oleekwa ebe ha si enweta ego e ji arụ ya?
Olee otú ụlọ akwụkwọ ndị e nwere ná nzukọ Jehova sirila nyere anyị anyị aka ije ozi anyị nke ọma?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Olee Ụlọ Akwụkwọ Ndị Ọsụ Ụzọ Na-agagasị?